( လမ်းခွဲလေးမှာ မင်းနဲ့ငါ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( လမ်းခွဲလေးမှာ မင်းနဲ့ငါ )	9
( လမ်းခွဲလေးမှာ မင်းနဲ့ငါ )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Jul 21, 2015 in Creative Writing, Poetry |9comments
မယုံရသူကို မင်းက ခစား
သေကာမှဖြင့် အေး ၊
မြစပဲရိုး says: . ကြည့်ရတာ သုံးပွင့်ဆိုင်ဘဲ။
. သေကာမှဖြင့် အေး ဆိုတာ ဘယ် အပွင့် ကို ပြောတာတုန်း။ lol:-)))
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: သေကာမှဖြင့် အေး ၊
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကဗျာတွေ ဖတ်ဖြစ်တယ်လို့။
ရင်တွင်းဖြစ်တွေမှာ မနောက်ချင်တော့လို့ ဝင်မမန့်ဖြစ်တာလို့။
တောင်ပေါ်သား says: အရီး ၊ ကိုပေါက် ၊ ကေဇီ
Kaung Kin Pyar says: ကံကို ယုံပြီး ဆူးပုံမနင်းနဲ့လေ..
တောင်ပေါ်သား says: တော်ပြီ
စိတ်ကြိုက်မင်းသမီးနဲ့ နောက်တစ်ကားကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာလုပ် ရိုက်တော့မယ် ၊
ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်း မင်းသား အားလုံး ကိုယ်တိုင်ပဲ ၊ ဟဲ ဟဲ အဲဒါဆို ဘယ်လိုနေမလဲ ? Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
Mike says: .အရှုံးသမားမို့ ပြုံးထားဖုိ့ဝေလာဝေး ..သေကာမှဖြင့် အေး
တောင်ပေါ်သား says: အဲဒီလိုမှ ဒီဇာတ်က ပြတ်မှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 486
Swal Taw Ywet says: အဟေ့။